တူရကီ - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အတ္တလန္တိတ်ကောင်စီ ၂၀၂၁ အတွက်အန္တရာယ်များစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စာရင်းအရအီရန်၊ တူရကီ၊ ရုရှားနှင့်မြောက်ကိုရီးယားတို့ကို "Rogue" States ဟုသတ်မှတ်သည်။ ယခုအချိန်အထိတူရကီသည်ရုရှားဒုံးကျည်များဝယ်ယူပြီးဂရိကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တူရကီသည်လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယားနှင့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသည်။
အစ္စရေးသည်တူရကီ၏မဟာမိတ်ဖွဲ့မှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မသက်မသာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအဆင့်မြင့်အစ္စရေးသံတမန်တစ် ဦး ကထုတ်ဖော်ခဲ့သည် ဂျေရုဆလင် Post ကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏ ဒီအပတ်။ တာဝန်ရှိသူ၏ပြောကြားချက်အရတူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanသည်အစ္စရေးနှင့်၎င်း၏မဟာမိတ်များအတွက်ပြproblemနာဖြစ်သည့်ဆက်သွယ်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်သူ၏တိုင်းပြည်နှင့်အစ္စရေးအကြားပိုမိုနီးကပ်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုလိုလားသည်။
2021 - အဆိုးမြင်သို့မဟုတ်အကောင်းမြင်
၂၀၂၀ သည်ဤရာစု၏အဆိုးဝါးဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအများစုကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်။ Covid-2020 သော့ခတ်မှုများသည်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ နွေ ဦး ရာသီတွင်တတိယမြောက်လှိုင်းလုံးကြီးအကြောင်းဟောပြောချက်လည်းရှိသည်။ လက်တွေ့တွင်မူတစ်နိုင်ငံချင်းခေါင်းဆောင်များ၏အနေအထားသည်အတိတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကွဲပြားနေသည်မဟုတ်ပါ။
တူရကီ - NGO ၏အားထုတ်မှုကိုဥပဒေဖိနှိပ်သည်
တူရကီပါလီမန်သည်သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ၏ AKP ပါတီမှအဆိုပြုထားသောတနင်္ဂနွေနေ့ကဥပဒေပြဌာန်းခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ရလဒ်.
အစ္စရေး - နေတန်ယာဟုဆန္ဒပြပွဲများဆက်လက်
၀ န်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူများသည်ဂျေရုဆလင်လမ်းများပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုသည်ပclိပက္ခများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးလူအများအပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ စနေနေ့ညနေပိုင်းတွင်အစ္စရေးတွင်ပေါ်လစီများကိုဆန့်ကျင်သောနောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ၀ န်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu.
တူရကီ Grand National Assembly သည်တူရကီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအားလစ်ဗျားတွင်တိုးချဲ့ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ၏အမိန့်အရတူရကီစစ်တပ်သည်လာမည့် ၁၈ လတာကာလအတွင်းလစ်ဗျားတွင်နေရာချမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်အာဏာရှင်ဟောင်းကဒါဖီသည်လွန်ခဲ့သောကိုးနှစ်ကလစ်ဗျားနိုင်ငံတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
လစ်ဗျား - တူရကီနိုင်ငံသည် LNA သင်္ဘော၏ဖမ်းဆီးရမိမှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်
တူရကီအနေဖြင့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိအရှေ့ဘက်အခြေစိုက်လစ်ဗျားတပ်ဖွဲ့များက၎င်း၏သင်္ဘောတစ်စင်းအားထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်။ ထိုသင်္ဘောအားလစ်ဗျားအနောက်ပိုင်းသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းနှင့်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်သတိပေးချက်ကိုသတိပေးလိုက်သည်။ Misurata ဆိပ်ကမ်းသို့ ဦး တည်နေသည့်သင်္ဘောသည် Ras Al Hilal ကမ်းခြေတွင်ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်.
နိုဝင်ဘာလ 27, 2020 နိုဝင်ဘာလ 27, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Nagorno-Karabakh ပconflictိပက္ခအရှိန်မြင့်လာခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသတင်းများ၏ရှေ့တန်းမှပါ ၀ င်သည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုရုရှား၊ အာမေးနီးယားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သမိုင်းကသူ့ဟာသူပြန်လုပ်လေ့ရှိပြီးအာမေးနီးယား၏အနာဂတ်သည်ပြfutureနာဖြစ်နိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တူရကီတရားရုံးက ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan အစိုးရအားအာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း ၃၃၇ ဦး ကိုလေတပ်အရာရှိများနှင့်လေယာဉ်မှူးများမှစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စီရင်ချက်ချ၌တည်၏။
ရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဆက်နွယ်မှုကို Nagorno-Karabakh ၏ "Armenian" အစိတ်အပိုင်းတွင်တပ်စွဲထားသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်အပြီးတွင်ရုရှား၊ အာမေးနီးယားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သဘောတူညီချက်ကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင်စတင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည်တာ ၀ န်များစွာကိုထမ်းဆောင်နေသည်။
Pompeo: ဥရောပ၊ ယူအက်စ်ဟာအာဒိုဂန်ကိုဆန့်ကျင်နေရမယ်
နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo ကပဲရစ်အခြေစိုက် Le Figaro အားပြောကြားရာတွင်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပအစိုးရများကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်မူဝါဒများကိုဖြေရှင်းရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရမည် တူရကီကသမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်း၌။ တူရကီသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းရေးမှူး Pompeo သည်တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 နိုဝင်ဘာလ 11, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Nagorno-Karabakh ဒေသနှင့်စပ်လျဉ်း။ ရုရှား၊ အာမေးနီးယားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်တို့အကြားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းသူများသည်မစ်ရှင်ကိုကြီးကြပ်ရန်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအတောအတွင်းအာမေးနီးယား ၀ န်ကြီးချုပ် Nikol Pashinyan ကသူသည်အာမေးနီးယားနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေပြီးသူ၏တာ ၀ န်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၂၀ - ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အချို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေနေကြသည်
နိုဝင်ဘာလ 9, 2020 နိုဝင်ဘာလ 9, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှစိတ်အားထက်သန်စွာ ၀ င်ရောက်လာသည် စနေနေ့မှာဒီမိုကရက်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတ Donald Trump ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ် အင်္ဂါနေ့ရွေးကောက်ပွဲများ၏နီးပါး - ပြည့်စုံတာလီဖိုးနီးယား၌တည်၏။ သို့သော်ထင်ရှားသည့်အချက်မှာထိပ်တန်းကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အချို့သည်ယခုအထိတိတ်ဆိတ်စွာနေကြဆဲဖြစ်သည်။